Super refu mushure-glow akateedzana
Kukurumidza kunakidza akatevedzana
Yakarongedzwa mbichana & gravel
Resin gravel akateedzera
Luminescent akaomarara bhodhi & firimu
Luminescent emergency emergency nzira yekupukunyuka
Photoluminescent jade & art inoshanda
Luminescent yarn & Machira
isina mvura Photoluminescent pigment
Floor yakadzikwa luminescent chabuda chiratidzo / lu ...
Luminescent Jade Uye Luminescent Jade's A ...
Super refu mushure-glow Photoluminescent Pigment
Luminescent beads Luminous beads luminous strin ...
Luminescent glaze tile ye emergency emergency system
Plastiki luminescent Mapuru
Luminous girazi mosaics
Kurumidza kufara Photoluminescent Pigment
Kupenya Mune Irima Yarn (Fiberi) / Kupenya MuDaro ...
2020 nyowani Photoluminescent firimu
Kupa luminescent purojekiti mhinduro
Kupa luminescent purojekiti mhinduro Kubva pamakore hunyanzvi hwekuwanda mukugadzira uye kushandiswa kwemaitiro anogara achivhenekera luminescent zvinhu, tinogona kupa zvakakwana hunyanzvi hwegadziriswa kune vatengi vari mumaindasitiri akasiyana siyana neminda Mhando yekusimbisa Chikamu chakakwanira zvigadzirwa zvakapedziswa 100% Kugutsikana kwevatengi: 96% Iyo nguva yekusarudzika kwemhinduro yevatengi ndeye 100% Kuchengetedzeka kwezvakatipotera Kubva panekambani tekinoroji nekugadzirwa kwemaitiro, yedu yakajeka, ...
Isu tiri sarudzo yako yakanaka kutenga luminescent zvinhu muChina
Isu tiri sarudzo yako yakanaka kutenga luminescent zvinhu muChina 1. Isu tinotarisa pane zvakajeka zvinoshandiswa chete. Tine anopfuura makore gumi nemashanu emhando yehunyanzvi ruzivo pazvinhu zvakajeka. Tine hunyanzvi mune zvakavheneka zvinhu. Izvo simba redu zvakare zvinhu zvakavhenekera. 2, Kutengesa luminescent zvinhu, isu tiri nyanzvi. Isu tiri nyanzvi nekuti takazvipira. Isu tinotarisa kune kupenya kunovhenekera kwechigadzirwa, kugadzikana kwechigadzirwa. Kubva pane chokwadi chekuvhenekesa brig ...
Chii chinonzi refu afterglow Photoluminescent pigment?
Photoluminescent pigment: Iyo inonzi zvakare: kupenya mune yakasviba poda, luminescent pigment, fluorescent poda Yedu yakareba mushure mekupenya pikicha-luminescent pigment ndeye strontium aluminate based luminous poda inogona Kusimudzira mwenje nekuisa magetsi akasiyana anoonekwa uye inogona kushandiswa kakawanda. Zvigadzirwa zvacho hazvina chero zvinhu zvinopenya uye zvinogona kutopararira sechiwedzera pakati pevamiririri pachena sezvakaita kubatisa, ink, pendi, mapurasitiki, zviyo, girazi, firita yekumisa mabasa emitting ..